Abasebenzisi abaningi kakhulu kwekhompuyutha neselula babhekana lo mbuzo: "Siyini isicelo" Akubona bonke predstavlyut nje ukuthi kuyini. Iqiniso liwukuthi ngezinye izikhathi, kokukhipha ilebula kusukela screen eyinhloko mobile Igajethi noma ithebula ideskithophu noma i-laptop, ingasaphathwa idivayisi yeselula, abantu abaningi bamane abaqapheli ukuthi mabazisingathe kanjani isimiso futhi.
Kuyini isicelo: imiqondo jikelele
singasho Imibandela ukuthi isicelo - lokhu akulona ifayela olulodwa, futhi ngezinye izikhathi inhlanganisela amafayela amaningi, zenziwe software eyodwa iphakheji. Isicelo ngokwayo ngokuya ubuchwepheshe bama-computer yifayela elisebenzisekayo ukuthi, ebhekisela, isibonelo, imitapo ohambisana ashukumisayo, yolwazi, noma enye into, uqala isicelo njengoba enjalo, ukulanda namadivayisi athile esemqoka isikhombi kanye amamojuli ezidingekile yayo zingasebenzi kahle.
Uma uthatha-computer, la mafayela ngokuvamile ziba .exe isandiso (Ifayela Executive - elisebenzisekayo). Ngaphambili, endaweni DOS-uhlobo izinhlelo beyohlanganyela elisebenzisekayo .bat uhlobo amafayela, amafayela umshayeli ukufakwa .inf, nokunye. D.
Kukholakala ukuthi evamile "ekzeshny" ifayela ku isicelo esihlukile kukalutshwana kakhulu. Kuye kumele bufakwe zonke izinhlobo amafayela ukumisa noma egciniwe, lapho libhekisela esikhathini kuyisiqalo senqubo. Ngisho e ephathekayo (ephathekayo) izinguqulo izinhlelo ezimweni eziningi zikhona izingxenye ezihambisana.
Ukuze ufake isicelo ikhompyutha noma idivayisi yakho yeselula, njengoba umthetho, it is ayisebenzi. Lwezinhlelo zama-computer, ngokuvamile ihlanganisa "Isethaphu wizadi» (Faka Isihlangu, Fakela Wizard t. D.).
Wena nje kufanele ulandele imiyalo yakhe, futhi ngezinye izikhathi ukukhipha eminye izingxenye ezengeziwe ukufakwa, ezihlinzekwa izinhlelo khulula. Ngokuvamile, lokhu panel ezengeziwe, bafakwe iziphequluli zewebhu, izinjini kanye nemikhiqizo isofthiwe ezidinga ukukhuthazwa emakethe.
Izinhlelo zamadivayisi eselula
Ngokuya mobile OS uhlobo Android, iOS, BlackBerry nezinye eziningi inqubo yokufaka ngokuyinhloko kufihlakele emehlweni yomsebenzisi. Uthi kuphela inqubo achazayo, ethi sicelo futhi ngaleyo ndlela futhi enjalo njengmanje noma ukulandwa.
Qaphela, kulesi simo (ngokungafani kwikhompyutha izinhlelo ekhombisa indawo) kwenzeka endaweni ukufakwa eshiwo mobile kakhulu "OSes". Ngakho ugcine ithrekhi kahle lapho esimisweni esisha ifakiwe, umsebenzisi isilinganiso cishe kungenakwenzeka.
ISITHASISELO "In Touch": kuyini?
Mhlawumbe, wonke umsebenzisi bhalisiwe kwelinye inethiwekhi ethandwa kakhulu social "VKontakte" Ngokuqinisekile ungathanda ukufinyelela unomphela idatha yakho, oxhumana nabo, izincwadi, ukulalela umculo, ubukele amavidiyo, unkulunkulu uyazi ukuthi yini enye. Ukuze wenze lokhu, futhi wadala isofthiwe ngokwezifiso tangcondvomshini, iPhone and iPad izicelo izinhlelo Android, nokunye. D., Njalo njalo. N. Njengomthetho, konke lo esibonakalayo efanayo kakhulu efanayo noma.
Kuwufanele uqaphele ukuthi iphakethe jikelele kuhlanganisa zokuxhumana kuphela ukuxhumana nomphakathi, isibukeli sesithombe, exchange izixhumanisi noma imiyalezo, ukushicilela okuthunyelwe kanti ezinye nezinye izinto.
Ngokusekelwe yokuthi iphakethe ejwayelekile ayiphelele, ngokuba yokuxhumana "VKontakte" kuyinto applets ezikhethekile isiyatholakala, isibonelo, umculo (indlela evamile ukugcina ithrekhi engcono ngeke isebenze). Kungokufanayo uya vidiyo.
Ngaphezu kwalokho, kuye ngokuthi version of the iphakethe egcwele, lapho zingase zihlanganise futhi eziningi ezihlukahlukene-add-on. Kungani amamojuli kuphela khulula ezifana "LoviVKontakte" ukuze balalele ukhululekile nokulanda multimedia, VKontakte DJ ukwenza nokuphatha multisession umsindo, VKontakte Unlock (izindlela ukuvula i-akhawunti), "uMmeli VKontakte", ukukuvumela ukuxhumana ngaphandle kokushayela ikhasi isiphequluli sewebhu, VKontakte inthanethi (isiphequluli likubeka ngokucacile, njengoba besho, "bavalelwa" ngqo zokuxhumana), VKAudioSaver ukulanda umculo noma MuzVK ukucinga bese ulanda amathrekhi ozithandayo nge ukufinyelela evamile noma kwangasese.
Lolu hlu kungenziwa agcwaliswa ngokuphindaphindiwe njengoba kakade kwase ecacile. Zuza namuhla abathanda ukudala izicelo ukusebenza kule nethiwekhi ethandwa, nekhanda ngokwanele. Kuyini ezithakazelisayo kakhulu, abantu abaningi ungahambi ehlathini lwezinhlelo bese usebenzisa jikelele yesikhulumi Java. Running lolu hlobo lokusebenza kungenzeka ngisho amadivayisi ngaphandle yesistimu yokusebenza ngokusemthethweni esibekiwe (nakuba wona ngokwawo oluthile noma ezinye ezivamile ifoni efanayo mobile namanje abakhona).
amaphutha kungenzeka uma ugijima kukhompyutha
Manje sinawo ukuze ungeze ku namafutha impukane encane. Izinkinga ezivamile nge computer yakho ugijima isicelo kungancipha kumuntu nezindaba eziyisisekelo ezimbalwa. Okokuqala, lokhu kungenxa yokuthi uhlelo noma applet ngokwalo nje kungavumelani "OSes". Lokhu kusebenza ikakhulukazi izicelo Win32 OS ne-64-bit izakhiwo.
Nakuba usekelo-32-bit izinhlelo, futhi inikeza, esikhathini esiningi basuke kubhekwe ukuthi ayisebenzi. Isimo esifanayo singabonakala uma uzama ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza-64-bit e Win32 izinhlelo.
Ihambisana nawo mobile wokusebenza
Ngokwazi amagajethi zikamakhalekhukhwini okuncike ku-iOS, i-Android noma yini enye, ngokuvamile kakhulu inkinga kuyehla kuphela yokuthi inguqulo yamanje yesistimu yokusebenza noma libuyekeze nje ayifani nemingcele ukuze isicelo ngokwalo. Njengoba ojwayelekile, ukuxazulula isimo esinjalo, kubalulekile ukubheka version zohlelo, esiklanyelwe ukuba OS ethize. Isibonelo elula: uma isicelo "contact" elikhona, isibonelo, kwi-Google Play Market, eklanyelwe ukufakwa kuphela uhlelo lokusebenza Android 4.4, ku "ezimbili" uhlobo version 2.3, kungenzeka ukubeka ngisho uzame (namanje akusebenzi).
Ukufana efanayo zingenziwa nge izinhlelo mobile (ngokunembile, ukushintshwa Smartphones) by Apple corporation.
Abathuthukisi kanye nezingcweti wale nkampani basonta nezidingo zomshini e ukufakwa kwezicelo, applets nezinhlelo mabi kakhulu kunamanye. Ngenxa yalokhu, ngo-indlela, futhi isekelwa i sonke isikhathi simo eliphezulu kumadivayisi wabo (okuyinto computer umile ukuthi mobile). Kulokhu, isicelo iPhone kwanoma iyiphi isizukulwane nabo bayajabula.
Izici isicelo "VKontakte"
Uma sicabangela izici lolu hlobo applet ukuqala umsebenzisi ngamunye uya ukulanda isofthiwe ethile evela kwi-Inthanethi, kubalulekile ukuba banakekele ukuqonda ukuthi isicelo esinjalo bebonke. Phela, namuhla (futhi akusiwona imfihlo) kunoma iyiphi ikhompyutha (ngisho ephathekayo noma smartphone nomunye) bangaba "umthombo ukutheleleka." Ukuqalisa isixhumanisi kunethiwekhi efanayo "VKontakte", ungakwazi kalula ubambe igciwane noma ikhodi enonya. Ngeshwa, ngokusho izibalo, lokhu abaningi kakhulu inethiwekhi iqukethe amagciwane inthanethi ukuthi ziyakwazi ukukhiqiza ukukopisha okuvele ukusatshalaliswa phakathi kwekhompyutha ezikhumulweni noma idivayisi yeselula.
Ngakho, ukuze uphendule lo mbuzo, yini isicelo, sinawo kuncane okwaziwayo ngaso. Ngomqondo onabile, uma sicabangela kohlelo yandiswe ezifana "VKontakte" enegama ezivamile, kuyafaneleka ukuthi imikhiqizo software ngokwabo namuhla ungathola eziningi, njengoba besho, bonke izikhathi, ngisho ezingalindelekile kakhulu. Enye into - ukuxoxa ukuphepha kwe-computer yayo noma idivayisi yeselula. Ngiyavuma, akekho ungafuni ubambe igciwane, okuyoholela wokugoqa lonke uhlelo. Ngokuqinisekile Kukhona kudingeka aqikelele, futhi zigwinye amafayela scan, amafolda, zomlando noma inkomba efanayo Antivirus for nobungozi.
Indlela ukususa umshayeli isiqophi ikhadi - zezindlela ezivame kakhulu
Le filimu "Mission Impossible: Ghost Esilula": nabalingisi izindima, indaba
Yini izinguquko olwenziwa Princess Olga? Yayiyini kwekuhlela kabusha Princess Olga?
Kanjani ngokushesha ukwelapha herpes labialis: iseluleko of imithi yendabuko